Venezoelà - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Venezoelà
Mitady asa any Venezoelà? Hamarino fa Ahoana ny fomba hahazoana iray
Novambra 21, 2020 Maitri Jha asa, Venezoela
Mitady asa any Venezoelà? Na nifindra tany Venezoela vao haingana? Afaka manampy anao izahay amin'ny fitadiavana azy. Ilay firenena dia malaza amin'ny indostrian'ny solika. Ary koa, anisan'ireo firenena 17 lehibe indrindra maneran-tany izy io. As, izany
Venezoeliana? Hamarino ny fomba fampiharana ho an'ny fiarovana fiarovana Asylum
Aprily 22, 2020 Demi mpitsoa-ponenana, Venezoela
Raha ny filazan'ny UNHRC dia mandao ny fireneny ny mponin'i Venezoelà. Izy ireo dia noho ny fitomboan'ny herisetra, ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fandrahonana. Ary koa, miatrika tsy fahampian-tsakafo, fanafody ary serivisy ilaina amin'ny serizy. Avy amin'ny tatitra UNHRC
Makà fampahalalana momba an'i Venezoelà Visa!
Aprily 22, 2020 Karuna Chandna Venezoela, visa ho
Any amin'ny morontsiraka avaratr'i Amerika atsimo no misy an'i Venezoela. Miaraka amin'ny mponina manodidina ny 3.7 crores dia malaza amin'ny solika, vehivavy tsara tarehy, Star Falls ary mpilalao baseball io. Raha mikasa ny hitsidika an'i Venezoela ianao. Ho an'ny fialantsasatra, fikarohana, fivoriana fandraharahana ary
Oniversite any Venezoelà
Febroary 4, 2020 Maitri Jha fianarana, Venezoela
Ny fikasana hianatra any Venezoela dia hijery ireo oniversite fito voalohany ao Venezoela. Oniversite ambony ao Venezoela Raha ny topuniversities.com, misy oniversite sivy ao Venezoela izay ao anatin'ny laharana ao amin'ny University Ranking (2018) an'ny QS Latin America University
Lisitry ny hopitaly any Venezoelà
Febroary 2, 2020 Maitri Jha fahasalamana, Venezoela
Ny rafitry ny fahasalamana Venezoelà dia mizara roa ho sokajy roa dia ny sehatra miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Ny lisitry ny hopitaly misy toerana sy nomeraon-telefaona dia omena ato amin'ity lahatsoratra ity. Hopitalin'ny oniversite - Hopitaly Maracaibo Luis Razetti - Barinas
Lisitry ny banky any Venezoelà
Febroary 1, 2020 Maitri Jha ny vola, Venezoela
Ny rafitra ara-bola be indrindra any Venezoela dia naneho fitomboana haingana. Izany dia teo anelanelan'ny taona 1950 sy 1980. Hita taratra ao ny fisian'ireo andrim-panjakàna matihanina. Tamin'ny 1989, ny sehatry ny serivisy ara-bola dia ahitana banky ara-barotra 41. Ivontoerana 23 famatsiam-bolan'ny governemanta,
Ny vidin'ny fiainana ao Venezoelà
Febroary 1, 2020 Maitri Jha Travel, Venezoela
Zava-dehibe tokoa ny vidim-piainana raha miresaka momba an'i Venezoela noho ny tena izy isika, mora vidy kokoa noho ny vidim-piainana any Etazonia izy io nefa, araka ny numbeo ny vidim-piainana any Venezoelà dia 11.58% mihoatra ny
Febroary 1, 2020 Maitri Jha mandehana, Venezoela
Tsy hahita fiaran-dalamby any Venezoelà ianao fa eny be dia be ny bus ka afaka mivezivezy mora foana ao anatin'ny firenena ianao miaraka amin'ny bus, fiara ary taxi. Tena zava-dehibe tokoa ny hitondrana hatrany ny karatra famantarana anao,
Fiantsenana any Venezoelà
Janoary 30, 2020 Demi zavatra atao, Venezoela
Tsy azontsika atao ny mitondra ny zava-drehetra miaraka amintsika any amin'ny toerana vaovao na dia te handray aza isika ary izany dia tena zava-dehibe ny fahalalana momba ny toeram-pivarotana izay akaiky na misy an'io firenena / tanàna manokana io. Amin'ity
Toerana mahafinaritra any Venezoela izay tsy maintsy tsidiho
Janoary 25, 2020 Karuna Chandna zavatra atao, Venezoela
Venezoelà dia firenena manana kolontsaina isankarazany ao amin'ny morontsiraka Avaratra any Amerika Atsimo. Izy io dia firenena manana tarehi-sava mahafinaritra, avy amoron-dranomasina ka hatrany an-tampon-tendrombohitra. Topazo maso ny lisitry ny toerana tsara indrindra ao Venezoelà